AL-SHABAAB oo noqotay kooxda ugu taajirsan ee ku xiran shabakada Al-Qaacida | Arrimaha Bulshada
Home News AL-SHABAAB oo noqotay kooxda ugu taajirsan ee ku xiran shabakada Al-Qaacida
AL-SHABAAB oo noqotay kooxda ugu taajirsan ee ku xiran shabakada Al-Qaacida
Bulsha:- Jeneraal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay tahay kooxda ugu taajirsan unugyada ku xiran shabakadda Al-Qacida ee dunida ka howl-gala.
“Al-Shabaab waa ciidanka ugu ballaaran, ugu taajiirsan uguna firfircoon ee Al-Qacida ay ku leedahay dunida, waxayna halis ku yihiin Mareykanka iyo shacabka Mareykanka,” waxaa sidaas yiri Jeneral Stephen Townsend oo ah taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika (AFRICOM), oo wareysi siiyey VOA.
Jeneral Townsend ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in halista Al-Shabaab ay sii korortay sideeddii illaa 12-kii bilood ee ugu dambeeyey, ayna ugu wacan tahay ciidankii Mareykanka ee ka baxay Soomaaliya iyo cudurka COVID-19.
“Waxaan u maleynayaa in halistaas ay sii kordheyso sababo la xiriira cadaadiskii ka hortagga argagixisanimo oo aan jirin sanadkii tegay, iyo firfircooni la’aanta ciidamada Amisom. Sabab kalena waa COVID-19,” ayuu yiri Townsend.
“Hoggaankooda waxay dagaal-yahanooda culeys ku saaraan inay dadka Mareykanka ku weeraraan meel kasta oo ay ku arkaan, marka waa inaan taas si dhab ah u qaadanaa.”
Jeneral Townsend ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya, loolanka doorashada iyo shaqada liidata ee dowladda federaalka ay sidoo kale caawisay Al-Shabaab.
“Waxaan ka walaacsanahay inuu jiri doono weerar weyn oo Al-Shabaab ay fuliso. Waxaan hada aragnaa weeraro is-miidaamin ah oo Muqdisho ka dhacayey labadii toddobaad ee tegay. Marka waxaan dareemayaa inay sii ballaaranayaan oo ay sii korayaan,” ayuu yiri taliyaha AFRICOM.
Hadalka Townsend ee la xiriira in Al-Shabaab ay hadda tahay kooxda ugu taajirsan kooxaha ku xiran Al-Qacida ayaan la-yaab laheyn marka loo eego heerka uu la egyahay dhaqaalaha kasoo gala Soomaaliya.
Qyaas ay sameysay dowladda Mareykanka, oo uu helay wargeyska New York Times bishii October 2021, ayaa muujineyso in dakhliga Al-Shabaab usoo xarooday sanadkii 2020 uu yahay 120 milyan oo dollar.